MAN UNITED VS SEVILLA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
MAN UNITED VS SEVILLA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage March 13, 2018
(Manchester) 13 Maarso 2018 – Murqa waynta Premier League ee Manchester United ayaa caawa marti gelinaysa kooxda reer Spanish ee Sevilla kulan ka tirsan wareegga 16-ka ee UEFA Champions League 2017/18. Lugtii hore ayaa goolal la’aan ku dhamaatay taasoo ciyaartan ka dhigaysa mid weli jiho kasta u furan.
Daafacyada Phil Jones iyo Marcos Rojo ayaa labaduba tababarka kusoo noqday. Paul Pogba iyo Anthony Martial oo labaduba ka maqnaa safkii todobaad dhamaadkii wajahey Liverpool, welina shaki baa ku jira.
Jesus Navas ayaa dhaawac ka qaba kubka, shaki baana ku jira. Waxaa isna dhaawac muruqa ah ku maqan Lionel Carole, halka uu tababarka kusoo laabtay Sebastien Corchia oo gumaarka ka sheeganayay.
Shaxda suurtagalka ah ee Man United (4-2-3-1)
Shaxda suurtagalka ah Sevilla 4-2-3-1)
AS ROMA VS SHAKHTAR DONETSK: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Messi iyo madaxwaynaha Barcelona oo isku qilaafsan dib u soo celinta Neymar (Yaa taageersan yaase ka soo horjeeda)